Iindaba -Yintoni i-Polyvinyl Chloride (PVC), kwaye isetyenziselwa ntoni?
Yintoni i-Polyvinyl chloride (PVC), kwaye isetyenziselwa ntoni?
IPolyvinyl Chloride (PVC) yenye yeepolymmer ezisetyenziswa kakhulu ehlabathini (ecaleni kweeplastiki ezimbalwa ezisetyenziswa ngokubanzi njengePET kunye nePP). Yinto emhlophe ngokwendalo kwaye inyibilika kakhulu (ngaphambi kokongezwa kweeplasties) zeplastiki. I-PVC ijikeleze ixesha elide kuninzi lweeplastikhi ezathi zaqala ukwenziwa ngo-1872 kwaye zenziwa ngentengiso yi-BF Goodrich Inkampani ngeminyaka yoo-1920. Ngokuthelekisa, uninzi lweeplastikhi eziqhelekileyo zaqala ukwenziwa kwaye zaba nentengiso esebenzayo kuphela kwii-1940s kunye nee-1950s. Isetyenziswa kakhulu kwishishini lokwakha kodwa ikwasetyenziselwa imiqondiso, usetyenziso lwezempilo, kunye nefayibha yengubo.
I-PVC iveliswa ngeendlela ezimbini ngokubanzi, eyokuqala njengeplima eqinileyo okanye engagcinwanga (RPVC okanye uPVC), kwaye eyesibini njengeplastiki eguqukayo. I-Flexible, plasticized okanye i-PVC eqhelekileyo ithambile kwaye iyakwazi ukugoba kune-UPVC ngenxa yokongezwa kwee-plasticizers ezinjenge-phthalates (umz. Diisononyl phthalate okanye i-DINP). I-Flexible PVC isetyenziswa kakhulu kulwakhiwo njengokugquma iingcingo zombane okanye ukutyibilika kumakhaya, izibhedlele, izikolo, nakwezinye iindawo apho indawo engenabungozi ibaluleke kakhulu, kwaye kwezinye iimeko ithatha indawo yerabha.
I-PVC eqinileyo isasetyenziswa nasekwakhiweni njengombhobho wokulungisa imibhobho yamanzi kunye nendlela yokuma ecaleni edla ngokubizwa ngegama elithi “vinyl” eUnited States. Umbhobho wePVC uhlala kubhekiswa kuwo “yishedyuli” (umz. IShedyuli 40 okanye iShedyuli 80). Umahluko omkhulu phakathi kweeshedyuli ubandakanya izinto ezinje ngobukhulu bodonga, ukulinganiswa koxinzelelo, kunye nombala.
Ezinye zeempawu zeplastiki ezibaluleke kakhulu zibandakanya amaxabiso asezantsi, ukumelana nokonakaliswa kwendalo (kunye neekhemikhali kunye neealkalies), ubunzima obuphezulu, kunye namandla aqine eplastikhi kwimeko yePVC engqongqo. Iyafumaneka ngokubanzi, isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona (yahlulwe yikhowudi yokuchonga intlaka "3").
Ixesha Post: Feb-02-2021